Aad u mashquulsan Qeybtii Koowaad 2021 ee Ellicott - Ellicott Dredges
Aad u mashquulsan Qeybtii Koowaad 2021 ee Ellicott
Qeybtii hore ee 2021 waxay aad ugu firfircooneyd Ellicott Dredges, LLC labadaba tas-hiilaadka waxsoosaarka ee Baltimore iyo New Richmond waxay ku mashquulsanaayeen dhismaha iyo rarka shixnadaha adduunka oo dhan. Laga bilaabo Juun 10, Ellicott wuxuu leeyahay illaa hadda:
Waxaa la geeyay wadar ahaan 14 qashin iyo xoojiyeyaal, 11 macaamiil oo kala duwan oo ku kala nool 5 dal oo kala duwan.
9 ka mid ah shixnadahaasi waxay ahaayeen kuwa loo yaqaan 'Dragon® Cutter Suction Suredges', oo u dhexeeyay cabbir ahaan iyo moodooyin ka kala yimid 370HPs (10 ″) ilaa 2070s (20 ″)
5 shirar boodh boodh ah ayaa loo diray macaamiisha, oo ay ku jiraan Ellicott cusub ee 20 ″ Tier 4 Booster (waxbadan oo ku saabsan sheygan cusub ee hoose)
Dhammaan shixnaddan oo la isku daray waxay u baahdeen in ka badan 50 xamuul oo xamuul ah si ay u rartaan!
Taxanaha 670 Maraakiibta laga Rarayo Warshadaha Baltimore
Ellicott Field Tech Josh Moscati oo ku yaal goobta oo leh 20 P Booster Bamka Hawlgalka
EPA Tier 4 20 peration Hawlgalka Bamka Kiciye
Ellicott's cusub ee la sii daayay ee 20 ster bamka suunka leh waxaa ku rakiban mashiinka EPA Tier 4 oo lagu qiimeeyay 1125 HP (838 kW) Kordhinta ayaa hadda ku jirta hawsha taageerida mashruuca DMP ee US Corps of Engineers 'ee Poplar Island, Maryland. Mashruucani wuxuu ku lug leeyahay in la soo dejiyo mug ah qiyaastii 1.9 milyan yd3 oo ah alaab la duugay oo la dhigayo goobta meelaynta.
Ellicott waxay soo bandhigeysaa xariiq dhameystiran oo ah kuwa la gashado oo la qaadan karo iyo bambooyin kor u qaada labadeena meelood: Warshada weyn iyo xafiisyada fulinta ee Baltimore, Maryland, iyo warshada labaad ee New Richmond, Wisconsin, USA.